Ny Repoblika Tseky dia mandrara ny olona tsy vita vaksiny amin'ny toerana malalaka rehetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Momba ny Tseky » Ny Repoblika Tseky dia mandrara ny olona tsy vita vaksiny amin'ny toerana malalaka rehetra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Repoblika Tseky dia mandrara ny olona tsy vita vaksiny amin'ny toerana malalaka rehetra.
Voarara tsy hiditra amin'ny toerana ho an'ny daholobe rehetra toy ny trano fisakafoanana, trano fijerena sinema ary fivarotana manomboka ny alatsinainy 19 novambra ny mponina Czech izay tsy mbola vita vaksiny COVID-22.
Ny Repoblika Czech dia mahita fihanaky ny areti-mifindra, misy tranga vaovao 22,479 voarakitra tamin'ny talata.
Mitombo ny isan’ny maty; matotra ny raharaha. Ny vaksiny ihany no vahaolana fa tsy misy hafa.
Ny praiminisitra tseky dia nitaraina ny olona tsy vita vaksiny noho ny fanakatonana hopitaly sy ny fisorohana ny fitsaboana ho an'ireo manana aretina hafa.
Repoblika TchekyNanambara ny praiminisitra nivoaka Andrej Babis fa ny firenena dia handray ilay antsoina hoe modely Bavarian manomboka ny alatsinainy amin'ny herinandro ho avy, mandrara ireo izay tsy nahazo vaksiny COVID-19 tsy hiditra amin'ny toerana ho an'ny daholobe. Ireo izay vao sitrana tamin'ny otrikaretina dia avela hiditra.
The Bavarian Ny maodely dia manondro fepetra henjana manohitra ny COVID nampidirina tany amin'ny fanjakana atsimon'i Alemaina. Markus Soder, BavariaNy praiminisitra, dia nilaza fa tsy misy safidy afa-tsy ny fampiharana "karazana fanakatonana ho an'ireo tsy vita vaksiny", amin'ny fitanisana ny fitomboan'ny tsindry amin'ny hopitaly sy ny mpiasan'ny mpitsabo.
Repoblika Tcheky Tsy mahazo miditra amin’ny toerana ho an’ny daholobe rehetra toy ny trano fisakafoanana, trano fijerena sinema ary magazay manomboka ny alatsinainy 19 novambra ho avy izao ny mponina tsy mbola vita vaksiny COVID-22.
Tsy ekena intsony ny fitiliana COVID-19 ratsy.
Nilaza ny praiminisitra fa hofoanana tanteraka ny fitiliana tena, satria nitaraina ny olona tsy nanao vaksiny noho ny fanakatonana hopitaly sy ny fisorohana ny fitsaboana ho an'ireo voan'ny aretina hafa.
“Mitombo ny isan’ny maty; matotra ny raharaha. Ny fanaovana vaksiny ihany no vahaolana fa tsy misy hafa”, hoy ihany izy.
Hiditra amin'ny fanakatonana ampahany amin'ireo tsy vita vaksiny ny firenena manomboka ny alatsinainy maraina, raha toa ka ankatoavin'ny kabinetra androany ny fameperana.
“Hampahafantatra ny Bavarian modely amin'ny alahady ka hatramin'ny alatsinainy. Midika izany fa ny fidirana amin'ny trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, na hetsika faobe dia avela ho an'ny olona vita vaksiny na tafavoaka velona. Ireo vita vaksiny amin'ny fatra tokana dia tsy maintsy manao fitiliana PCR, "hoy i Babis tao amin'ny fahitalavitra any an-toerana.
The Repoblika Tcheky dia mahita fisondrotan'ny otrikaretina COVID-19, miaraka amin'ny tranga 22,479 vaovao voatatitra tamin'ny talata lasa teo.
Raha 68% amin'ny olona no atao vaksiny any Alemaina, ary 65% ​​any Aotrisy, mihoatra ny 60% no vita vaksiny any Repoblika Tcheky.